नेपाल आइडलवाट बाहिरिए सागर आले, कस्ले कति भोट पाए ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपाल आइडलवाट बाहिरिए सागर आले, कस्ले कति भोट पाए ?
भदौं २३,काठमाडौं । नेपाली टेलिभिजन एपी वानबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल ‘गाला राउन्ड’ को ‘टप फोरवाट शुक्रबार सागर आले बाहिरिएका छन् । दर्शकको कम भोट पाएर नारायणगढ चितवन २० वर्षीय आलेलाई आउट घोषणा गरिएको हो। सागर आलेले खुसी खुसी नेपाल आइडलबाट बिदा भए ।
उनले आफनो बुवाआमाले धेरै दुःख गरेको बताए । अरु बाहिरिँदा रुने सागर आफै बाहिरिँदा भने रोएनन । अतिथि निर्णायक बसन्त चौधरी भने सागर बाहिरिँदा भावुक भएका थिए । उनले सागरलाई कुनै दिन आफनो गीत रेकर्ड गराउने कुरा पनि बताए । साथै सागरले नेपाल आइडल फेयर भएको भन्दै गाली नगर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
नेपाल आइडल फाइनलको लागि अब बुद्ध लामा, प्रताप दास र निशान भट्टराईबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सबै प्रकारका गीत सुन्न र गाउन रुचाउने सागर आलेमगरलाई नारायण गोपाल, ज्ञानु राणा, तारा थापा, भक्तराज आचार्य एवं एड्रियन प्रधानको स्वर मन पर्छ ।परिवारमा सांगीतिक वातावरण भएकाले यस क्षेत्रमा आफूलाई सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल आइडलको विजेताले २० लाख रुपैयाँ नगद, महिन्द्राको कार, १५ लाख बराबरको एल्बम, फस्र्ट रनर अपले १५ लाख र सेकेन्ड रनर अपले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
कसले पाए कति भोट पाए